Vaovao - nopetahany takelaka / VINYL vita amin'ny PVC
Voahosotra / VINYL vita amin'ny PVC
Ireo horonan-taratasy dia alefa any amin'ny fonenan-kalitaon'ny dadatoako mba hosaronany manokana. Ity milina ity dia miavaka amin'ny famonoana vinyl ny karazana harato tariby rehetra, ao anatin'izany ny harato ampiasaina amin'ny fananganana vela-pandrika. Eto dia misy fonosana avo lenta sy matevina ary malefaka amin'ny UV voatsabo Black PVC mifamatotra mafy amin'ny harato tariby. Ny paty dia mifamatotra mafy ka manohitra ny fanesorana. Tsy azo esorina mora amin'ny rantsan-tongotra izy io. Ary tsy hiala mora foana.
Ny vokatra vita dia kalitao voalohany amin'ny lafiny rehetra. Sarotra ny maminavina ny androm-piainana andrasana. Ny toetoetran'ny tontolo iainana eny an-toerana, ny rivotra sy ny orana dia misy fiatraikany amin'ny halavan'ny fotoana hiketrahan'ny fefy. Ireo fepetra ireo dia samy hafa be amin'ny faritra iray amin'ny firenena ka hatramin'ny faritra iray hafa.
Ny fahalalana ny fitaovana dia novokarin'ny mpianadahy dadatoako izay mana-pahaizana manokana amin'ny fanaovana PVC mandritra ny 15 taona dia afaka manome toky anao fa ity vokatra ity no kalitao avo indrindra azo. Ny fikirakirana fanampiny sy ny fandefasana entana mifindra amin'ny famindrana ny fitaovana avy amin'ny iray kilaometatra mankany amin'ny iray hafa dia tsy hanampy ny vola mandritra ny elanelana lavitra. Saingy ny kalitao sy ny fiaretana dia misy isaky ny horonana ary miresaka momba izany.